फेसबुकले प्रकाश दाहालको निधनपछी आफसेआफ उनको एकाउन्ट यसरि गरिदियो परिवर्तन ! प्रकाशको मृत्युको खबर कसरी पायो फेसबुकले ? « Light Nepal
फेसबुकले प्रकाश दाहालको निधनपछी आफसेआफ उनको एकाउन्ट यसरि गरिदियो परिवर्तन ! प्रकाशको मृत्युको खबर कसरी पायो फेसबुकले ?
काठमाडौँ । फेसबुकले आइतवार निधन भएका प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालको फेसबुक आफसेआफ परिवर्तन गरिदिएको छ ।
प्रकाशको मृत्युको खबर कसरी पायो फेसबुकले ?
विश्वमा झन्डै आधा जनशंख्याले फेसबुक चलाउँछन् । ति मध्ये दैनिक हजारौंको मृत्यु भईरहेको हुन्छ । फेसबुक आफैले जो-जो प्रयोगकर्ता मर्छन, सबैको एकाउन्ट परिवर्तन गर्न भने सक्दैन ।
तर जो व्यक्ति मर्छ र उसलाई समवेदना भन्दै उसको फोटो सेयर गर्ने तथा फेसबुक मार्फत दु:ख व्यक्त भएपछी फेसबुकले त्यस्ता व्यक्तिको एकाउन्टलाई memorialized accounts को रुपमा परिवर्तन गरिदिन्छ । प्रकाशको फेसबुक एकाउन्ट पनि यस्तै भएको हुनसक्छ ।
प्रयोगकर्ता मरेपछि उसको फेसबुक एकाउन्टआई फेसबुकले आफसेआफ memorialized accounts बनाउँछ जुन एकाउन्ट परिवर्तन हुने आधारहरु तल पढ्न सक्नुहुनेछ ।
तपाइँले पनि स्वर्गीय प्रकाश दाहालको फेसबुक https://www.facebook.com/prakash.dahal.35762 मा क्लिक गरि उक्त परिवर्तन हेर्न सक्नुहुनेछ ।
मानिस मरेपछि फेसबुक एकाउन्ट के होला ? यस बारे धेरैलाई जिज्ञाशा छ भने तल हामीले त्यसबारे चर्चा गरेका छौं ।
मरेपछि फेसबुक एकाउन्ट के हुन्छ भन्ने बारे थप चर्चा गरौँ :-
यहाँ हामीले फेसबुकको केहि यस्तो सेटिङको बारेमा बताउन गईरहेका छौं जसको बारेमा तपाइँलाई थाहा नहुन सक्छ । यी सेटिङ्ग तपाइको मृत्युसँग जोडिएको छ ।
यदी तपाई चाहनु हुन्छ कि मरेपछि पनि तपाइको एकाउन्ट अपडेट भईरहोस् ? यदी त्यसो हो भने सेटिङ्ग मार्फत तपाइँले मिलाउन सक्नुहुन्छ ।
त्यस्तै मरेपछि तपाइँ आफ्नो फेसबुक स्थाई रुपमै डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि सेटिङ्ग मार्फत मिलाउन सक्नुहुन्छ । यस्ता सेटिसिङ्ग सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
आउनुहोस् साझा सबाल टिप्स अन्तर्गत आज तपाइँलाई हामी त्यस्तो सेटिङ्ग मिलाउने तरिकाबारे जानकारी दिनेछौं ।
मरेपछी पनि तपाइँको फेसबुक चलिरहन्छ
यदी तपाई आफु मरेपछि पनि फेसबुक चलिरहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने Settings मा गएर Manage Account मा जानु पर्छ । त्यहाँ Chooseafriend भन्ने अप्सन देखिन्छ ।
त्यहाँ तपाइले आफ्नो कुनैपनि साथीलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाइ मरेपछि पनि तपाइको फेसबुक एकाउन्ट अपडेट गर्न सक्छ ।
Add मा क्लिक गरेपछि एउटा म्यासेज तपाइको साथीलाई जान्छ र उसले स्वीकृत गरेपछि तपाइको एकाउन्टमा तपाइको साथी जोडिन्छ । अब तपाइको त्यस साथीले तपाइँ मरेपछि पनि तपाइको फोटो अपडेट गर्न सक्छ । तर उसले तपाइको एकाउन्ट लगइन भने उसले गर्न सक्दैन । साथै पोष्टहरु सेयर गर्न पनि सक्दैन ।
मरेपछि तपाइको फेसबुक आफसेआफ डिलीट गर्न पनि सकिन्छ
यदि तपाइँ मरेपछि आफ्नो फेसबुक पनि डिलिट गर्न चाहनु हुन्छ भने तपाई Facebook एकाउन्टको Setting मा जानुहोस् । यहाँ तपाइले Manage Account अन्तर्गत legacy contact को अप्सन देख्नुहुन्छ ।
त्यसमा क्लिक गरेर तल्लोपट्टि Request Account Deletion देख्न सक्नुहुन्छ । त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् । अब Delete After Death अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् । त्यसमा तपाइँ मरेपछि फेसबुकले तपाइको फेसबुकनै डिलिट गरिदिन्छ ।
साभार – पश्चिम न्युज डटकमबाट